နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသည် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု များကို နိုင်ငံတကာနယ်နိမိတ်များ သို့မဟုတ် ပိုင်နက်များအား ဖြတ်သန်း၍ လဲလှယ်ဖလှယ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ များစွာသော နိုင်ငံတို့တွင် ၎င်းသည် စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုတန်ဘိုး (GDP) ၏ ထူးခြားထင်ရှားသည့် ဝေစု ဟုဖော်ပြပါသည်။ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသည် သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး တည်ရှိနေစဉ်တွင် (ပိုးလမ်းမကြီး၊ ပယင်းလမ်း ကိုကြည့်ပါ)၊ ၎င်း၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် နိုင်ငံရေး အရေးပါမှုများသည် မကြာမီသော ရာစုနှစ်များတွင် မြင့်မားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတည်ထောင်ခြင်းများ၊ တိုးတက်လာသည့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုများ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုများ၊ နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနှင့် ပြင်ပမှဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့သည် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစနစ်အပေါ်တွင် အဓိကထိရောက်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်သည်။ တိုးမြှင့်လာသည့် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှု ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်သွားရေးအတွက် အရေးပါလှသော လိုအပ်ချက် ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးမရှိပါက နိုင်ငံများသည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်သည့် နယ်နိမိတ်များအတွင်းတွင်သာ ထုတ်လုပ်မှုပြုရန် ကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။
ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတို့၏ အခြားသော ခြားနားချက်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံအချက်များ ဖြစ်သော ငွေကြေးအရင်းအနှီးများနှင့် လုပ်သား တို့ကို အစဉ်အလာအားဖြင့် တိုင်းပြည် များအား ဖြတ်သန်းခြင်းထက် တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အတွင်းတွင် ပိုမိုရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးသည် ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ကုန်သွယ်မှုပြုရန် များသောအားဖြင့် ကန့်သတ်ထား၍ ပိုမိုနည်းသော ပမာဏကိုသာ ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ လုပ်သားများ သို့မဟုတ် အခြားသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံများတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ကုန်သွယ်ခြင်းများသည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အခြေခံများကို ကုန်သွယ်ခြင်းအတွက် အစားထိုးမှုတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံတစ်ခုကို တင်သွင်းခြင်းအစား တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သည် ယင်းကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံအား လွန်ကဲစွာ အသုံးပြုထားသည့် ကုန်ပစ္စည်း များကို တင်သွင်းမှုပြုနိုင်၍၊ ဤသို့ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်ကို ရုပ်လုံးဖော်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ လုပ်သားပါဝင်မှုများသည့် ကုန်ပစ္စည်း များကို တင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်အလုပ်သမားများကို တင်သွင်းခြင်းအစား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ တရုတ်အလုပ်သမားများဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ကုန်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသည် စီးပွားရေးပညာ၏ အခက်အလက် တစ်ခုဖြစ်၍၊ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေး နှင့် အတူ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးပညာ၏ ပိုမိုကြီးမားသော အခက်အလက်အဖြစ် ပုံဖော်စေသည်။
နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသည် အမျိုးမျိုးသော ငွေကြေးစနစ်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိက အရေးကြီးသည်များကို နိုင်ငံခြားငွေ အရန်ငွေများအဖြစ် အစိုးရများနှင့် ဗဟိုဘဏ်များမှ ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ဤနေရာတွင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ငွေကြေးစနစ်တစ်ခုခြင်းစီအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင် ရာ တိုးပွားလာသည့်အရန်ငွေများ၏ ရာခိုင်နှုန်းများကို ဖော်ပြထားသည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သည် အများဆုံးရှာဖွေယူကြသည့် ငွေကြေးဖြစ်၍၊ ယူရိုသည်လည်း အလားတူပင် ခိုင်မာသည့် တောင်းဆို ချက်များ ရှိသည်။
အစဉ်အလာအရ ကုန်သွယ်ရေးသည် နှစ်နိုင်ငံအတွင်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါဝင်သော သဘောတူစာချုပ်များ မှတစ်ဆင့် စည်းကမ်းချက်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ရာစုနှစ်များစွာကပင် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာစနစ် ၏ ယုံကြည်ချက်အောက်တွင် များစွာသောနိုင်ငံတို့သည် မြင့်မားသည့်အခွန်စည်းကြပ်မှုများနှင့်၊ နိုင်ငတကာကုန်သွယ်ရေးအပေါ်တွင် များစွာသော ကန့်သတ်ချက်များ ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ၁၉ ရာစုနှစ်တွင် အထူးအားဖြင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ၌၊ လွတ်လပ်သည့် ကုန်သွယ်ရေးစနစ်တွင် ယုံကြည်ချက်သည် ထိပ်တန်းသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ယင်းယုံကြည်ချက်သည် အနောက်နိုင်ငံများအကြား လွှမ်းမိုးလာသည့် အတွေးအခေါ်အဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကတည်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်ဆိုင်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် ကုန်သွယ်မှုအဆောက်အအုံ ကိုတီထွင်ဖန်တီးရန်ဆောင်ရွက်စဉ် အငြင်းပွားစရာဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သော အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုအပေါ် အထွေထွေသဘောတူညီချက် (GATT) နှင့် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတို့က လွတ်လပ်သည့်ကုန်သွယ်မှုကို မြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြသည်။ ယင်းကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်များသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား အကျိုး သက်ရောက်မှုမရှိသည့် မျှတမှုမရှိသော ကုန်သွယ်မှုများဟူသည့် စွဲချက်များဖြင့်မကျေနပ်ခြင်းများ၊ ကန့်ကွက်မှုများက မကြာခဏ အဖြေထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
လွတ်လပ်သည့်ကုန်သွယ်မှုကို အများဆုံးစီးပွားရေးအရ တန်ခိုးအာဏာရှိသည့်နိုင်ငံများမှ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အရ အများဆုံးခိုင်မာစွာပံ့ပိုးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် နည်းဗျူဟာကျစွာ အရေးကြီးသောကာကွယ်ထားသည့် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများအသုံးပြုသည့်ယူနိုက်တက်စတိတ်(စ်)နှင့် ဥရောပမှစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံခြားမှသွင်းကုန်များအပေါ် အခွန်နှင့်ပစ္စည်းများတန်ဖိုးစာရင်းကောက်ခံခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံခြားယှဉ်ပြိုင်မှုမှ ကာကွယ်ထားသောဝါဒများတွင်မကြာခဏပါဝင်ပတ်သက်သည်။နယ်သာလန်နှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း တို့သည် လွတ်လပ်သည့် ကုန်သွယ်မှုကို စီးပွားရေးအားဖြင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးချိန်များတွင် နှစ်ဦးစလုံး ခိုင်မာစွာ ထောက်ခံသူများ ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့အခါတွင် ယူနိုက်တက်စတိတ်(စ်)၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဩစတြေးလျနှင့် ဂျပန်တို့သည် အကြီးမားဆုံးသော ထောက်ခံသူများ ဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့ဆိုစေ၊ အခြားသောနိုင်ငံများ (တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ ကဲ့သို့သော) သည်လည်း လွတ်လပ်သည့် ကုန်သွယ်ရေးကို ထပ်မံထောက်ခံသူများ ဖြစ်လာကြသည်မှာ၊ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စီးပွားရေးအားဖြင့်တန်ခိုးအာဏာကြီးမားသူများ ဖြစ်လာကြ၍ ဖြစ်သည်။ အခွန်စည်းကြပ်မှုအဆင့်များ လျှော့ချချိန် တွင်၊ အခွန်မစည်းကြပ်ရန် အတိုင်းအတာများကို ညှိနှိုင်းရန် လိုလားချက်များထပ်မံ ရှိလာခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှု လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းများ အပါ အဝင် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယသည်လုပ်ငန်းကိစ္စ ကုန်ကျစရိတ်များ ဆက်နွယ်နေသည့် တွေ့ဆုံကုန်သွယ်ရေးနှင့် အကောက်ခွန် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ကို ကြည့်ရှုပါသည်။
နိုင်ငံခြားမှသွင်းကုန်များအပေါ် အခွန်နှင့်ပစ္စည်းများတန်ဖိုးစာရင်းကောက်ခံ ခြင်းဖြင့်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းကိုနိုင်ငံခြားယှဉ်ပြိုင်မှုမှ ကာကွယ်ထားသောဝါဒကို ထောက်ခံချိန်အထိ ထုံးတမ်းစဉ်လာအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စိတ်ပါဝင်စားမှုများသည် ထုံးစံအတိုင်းလွတ်လပ်သည့်ကုန်သွယ်မှုကို သဘောကျစေသည်။[ကိုးကားရန်လိုအပ်သည်] ယင်းသည် နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် အတော်အတန် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ မည်သို့ဆိုစေ အမှန်အားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ စည်းရုံးထောက်ခံသူများသည် အထူးအားဖြင့် ယူနိုက်တက်စတိတ်(စ်)၊ ဥရောပနှင့် ဂျပန်တို့တွင် အခြားသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှု များထက် စိုက်ပျိုးရေးတွင် ပိုမိုကာကွယ်ခြင်း အတိုင်းအတာများအား ခွင့်ပြုသည့် သီးသန့်ဖြစ်သော စည်းမျဉ်း များကို အဓိက တာဝန်ရှိသည်။
စီးပွားရေးကျဆင်းချိန်များတွင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများ ကာကွယ်ရန် အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများ တိုးမြှင့် ရန် မကြာခဏခို်င်မာသည့် ပြည်တွင်းဖိအားပေးမှုများ ရှိခဲ့သည်။ ယင်းသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကြီးမားသည့် စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်ရောက်ချိန်၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ များစွာသော စီးပွားရေးပညာရှင်များက အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများသည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးပြိုလဲသည့် နောက်ကွယ်မှ လေးနက်သည့် အကြောင်းပြချက်များဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ အများက ယုံကြည်ကြသည်မှာ ၎င်းသည် စီးပွားရေးကပ်ကို ပြင်းထန်စွာ နက်ရှိုင်းစေသည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဆင့်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီး ၎င်းသည် များပြားသည့် အခြားသော ဒေသဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များဖြစ်၍ တောင်အမေရိကရှိ မာကိုဆာ (MERCOSUR), မြောက် အမေရိက လွတ်လပ်သည့် ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် (NAFTA) နှင့် ယူနိုက်တက်စတိတ်(စ်)၊ ကနေဒါ နှင့် မက်ဆီကိုတို့အကြားနှင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ နှင့် လွတ်လပ်သည့် ပြည်နယ် ၂၇ခု တို့မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် ဘိုးရိုးစ်အဲစ်သည် အမေရိကား၏ လွတ်လပ်သည့် ကုန်သွယ်မှုဧရိယာ(FTAA) ၏ စီမံချက်ချထားပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှု ၏အကြီးအကျယ်ကျဆုံးခဲ့မှုကို ပြောဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လက်တင်အမေရိကန်လူမျိုးများက ကန့်ကွက်ကြခြင်းများကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအပေါ်တွင် ဘက်ပေါင်းစုံသဘောတူညီချက်များ (MAI) ကဲ့သို့သော အလားတူသဘောတူညီချက်များသည်လည်း နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင် ကျဆုံးခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးတွင် စွန့်စားမှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]
နိုင်ငံတကာ နယ်နိrfမိတ်များကို ဖြတ်ကျော်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေသည့် ကုမ္ပဏီများသည် တင်းကျပ်သည့် ပြည်တွင်းလုပ်ဆောင်ချက်များတွင်သာမန်ပေါ်လွင်မြင်သာသည်များကဲ့သို့ များစွာသော စွန့်စားမှုများ ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံကြရမည် ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်-
စစ်ပွဲများနှင့်အခြားသောချုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်ရပ်များ။ထို့အပြင်၊နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးသည် မသင့်လျော်သောနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအပြောင်းအလဲများ၏ စွန့်စားမှုများနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိသည်။ (နှင့် ကောင်းမွန်သောအပြောင်းအလဲများ၏ အလားအလာရှိသော အကျိုးကျေးဇူးများ)
အာဆီယံ-အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေး Archived 26 September 2010 at the Wayback Machine.
မဇ္ဖျိမ အွန်လိုင်းသတင်းဂျာနယ် Archived 27 October 2010 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး&oldid=702285" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။